အမေရိကန်ချွေးမ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမေရိကန်ချွေးမ
Posted by နွယ်ပင် on Jan 12, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 19 comments
(၃)နှစ်ပဲရှိတဲ့ ထော်ဘီလေးဟာ ခြေအိတ်ရဲ့အရှေ့အနောက်၊ ဘယ်ဖိနပ်၊ ညာဖိနပ်ကို ခွဲတတ်သေးသူ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါက ထော်ဘီဟာ ဘောင်းဘီကို ရှေ့နဲ့နောက် ပြောင်းပြန်ဝတ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါကို ကျွန်မက လဲပေးဖို့ပြင်တော့ စူစန်က ကျွန်မကိုတားတယ်။ တကယ်လို့ ဝတ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာ မရှိဘူးဆိုရင် သူ့ဘာသာသူ ချွတ်ပြီးပြန်လဲလိုက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သူနေရ သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်ဆိုရင်
တစ်ခါက ထော်ဘီတစ်ယောက် ဘေးအိမ်က ကလေးတွေနဲ့ဆော့ကစားနေခဲ့တယ်။ တအောင့်ကြာတော့ မောမောပန်းပန်းနဲ့ အိမ်ကို အပြေးပြန်လာပြီး “မေမေ…မေမေ.. လူစီကပြောတယ်။ သားဘောင်းဘီ ရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ တကယ်လားဟင်!” လူစီဆိုတာ ဘေးအိမ်က အသက်(၅)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးပါ။
သားအမေးကို စူစန်ကရယ်ပြီး “ဟုတ်တာပေါ့သား… သားပြန်လဲမယ်မဟုတ်လား!” လို့ပြောတော့ ထော်ဘီခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး သေချာကြည့်တယ်။ ပြန်ဝတ်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ထော်ဘီ ဘယ်တော့မှ ဘောင်းဘီကိုပြောင်းပြန် မဝတ်ခဲ့မိတော့ဘူး။
ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး မြေးမလေးကို ကျွန်မသတိရလိုက်မိတယ်။ မြေးမလေးဟာ အသက်(၅)နှစ်(၆)နှစ်ထိ ဇွန်းမကိုင်တတ်ခဲ့သေးဘူး။ ဖိနပ်ကြိုး မချည်တတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီကနေ့မှာ အလယ်တန်းတက်နေတဲ့အထိ ကျောင်းဆောင်ကနေ အိမ်ကိုပြန်လာတိုင်း လျှော်စရာအဝတ်တွေ သယ်ပြန်လာတတ်သေးတယ်။
“ကြည့်ရတာ သား တကယ်ထမင်းစားချင်ပုံမရဘူး။ မှတ်ထား… အခုချိန်ကစပြီး မနက်ဖြန်မနက်အထိ သားဘာမှ မစားရဘူး။ သိလား”
ညနေရောက်တော့ ညနေစာအတွက် စူစန်နဲ့ကျွန်မ တိုင်ပင်နေခဲ့တယ်။ ညနေစာကို တရုတ်အစားအစာပြင်ဆင်ဖို့ စူစန်ကပြောတယ်။ ထော်ဘီတရုတ်အစားအစာ သိပ်ကြိုက်မှန်း ကျွန်မချက်ချင်း သတိရလိုက်တယ်။ ကြည့်ရတာ နေ့လယ်စာသေချာမစားခဲ့တဲ့ ထော်ဘီကို ညနေမှာ စူစန်ပိုစားစေချင်ခဲ့ပုံ ရတယ်။
လေးလေးနက်နက်ပြောနေတဲ့ မေမေ့မျက်နှာကြောင့် ထော်ဘီ ဝါးခနဲထငိုတယ်။ ငိုနေရင်းက “မေမေ… သားဆာလို့ပါ.. သားဗိုက်ဆာလို့ပါ” လို့ပြောတယ်။
“ရတာပေါ့…” နူးနူးညံ့ညံ့ပြန်ဖြေတဲ့ စူစန်ရဲ့အဖြေကြောင့် ထော်ဘီဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်။ အစာအရပ်ခံလိုက်လို့ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာမျိုး ထော်ဘီနောက်ထပ် ခံရဲတော့မယ် မထင်ပါဘူး။
ရုတ်တရက် ထော်ဘီတစ်ယောက် အိုးတစ်လုံးယူပြီး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကို ခေါက်ထည့်လိုက်တယ်။ စစချင်းမှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့အဖြစ်ကြောင့် ကောင်မလေးကြောင်သွားတယ်။ အဲဒီနောက် အသံကုန်အော်ငိုတော့တယ်။ အငယ်တစ်ယောက်ငိုတော့ အကြီးတစ်ယောက်ကလည်း လန့်ပြီးထငိုတော့တယ်။ ဒီလောက်ထိ ကြီးကျယ်သွားမယ်မှန်း မထင်ခဲ့တဲ့ ထော်ဘီဟာ ဘေးမှာရပ်ပြီး ကောင်မလေးတွေငိုတာကို ကြောင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။
အခင်းဖြစ်ရာကို စူစန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အကျိုးအကြောင်းကို ခန့်မှန်းမိတဲ့စူစန်ဟာ စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ အိုးယူပြီး ထော်ဘီခေါင်းကို အားနဲ့ခေါက်ထည့်လိုက်တယ်။ ထော်ဘီ ကာကွယ်ချိန်မရလိုက်ဘူး။ မြက်ခင်းပြင်ပေါ် ဖင်ထိုင်လဲကျသွားပြီး တဝါးဝါးနဲ့ အော်ငိုတော့တယ်။ ဒါကို စူစန်က “နာလား! နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်ရဲသေးလား?” လို့ မေးတယ်။ ထော်ဘီ ငိုရင်း ခေါင်းခါပြတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သူလုပ်ရဲတော့မှာ မဟုတ်မှန်း ကျွန်မ ယုံကြည်မိပါတယ်။
တအောင့်အကြာမှာ လူစီစက်ဘီးလေးစီးပြီး ပြန်လာတယ်။ လူစီကိုတွေ့တာနဲ့ ထော်ဘီဟာ လူစီကိုပြေးတွန်းပစ်ပြီး စက်ဘီးကိုပြန်လုလိုက်တယ်။ မြေပေါ်ထိုင်ပြီး လူစီအော်ငိုတော့တယ်။ ဒါကိုတွေ့တော့ စူစန်က လူစီကိုအပြေးပွေ့ပြီး ချော့မော့လိုက်တယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး… လူစီတစ်ယောက် တခြားကလေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကစားနေတော့တယ်။
ထော်ဘီဟာ စက်ဘီးစီးရင်းစီးရင်း ပျင်းလာပုံရတယ်။ တခြားကလေးတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကစားနေတာတွေ့တော့ သူလည်း ပါချင်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနားက လူစီကိုတွန်းထားတဲ့စိတ်က မနေသာခဲ့ပြန်ဘူး။ စူစန်ဆီလာပြီး စူပုပ်ပုပ်လေးနဲ့ “မေမေ…သားလည်း လူစီတို့နဲ့ ကစားချင်တယ်” လို့ဆိုတယ်။
ထော်ဘီတစ်ယောက် စက်ဘီးလေးစီးပြီး လူစီတို့အနား တဖြေးဖြေးချည်းကပ်သွားတယ်။ လူစီနားရောက်ခါးနီး စက်ဘီးကို နောက်ပြန်လှည့်ပြန်တယ်။ အဲဒီလို အကြိမ်ကြိမ်လုပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာသွားမှန်း မသိပါဘူး… ထော်ဘီနဲ့လူစီ ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နဲ့ ဆော့ကစားနေတာကို တွေ့လိုက်ပြန်ပါတယ်။
စူစန်ရဲ့မိဘတွေက ကယ်ရီဖိုးနီးယားမှာ နေပါတယ်။ ကျွန်မရောက်လာသံကြားတော့ နှစ်ယောက်သား ကားမောင်းပြီး ကျွန်မဆီ အလည်လာကြတယ်။ အိမ်ကို ဧည့်သည်တွေလာတော့ ထော်ဘီတစ်ယောက် မြူးတူးခုန်ပေါက်နေတော့တယ်။
စူစန်အပြောကို ထော်ဘီမနာခံဘဲ အော်လိုက် ငိုလိုက်လုပ်နေခဲ့တယ်။ စူစန်ဟာ စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘဲ ထော်ဘီကိုဆွဲပြီး စတိုခန်းထဲထည့် သော့ခတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ အကြောက်အလန့်အော်ငိုနေတဲ့ ထော်ဘီအသံကိုကြားတော့ ကျွန်မစိတ်တွေ နာကျင်ခဲ့မိတယ်။ စတိုခန်းထဲကနေ သူ့ကို ခေါ်ထုတ်ချင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါကို စူစန်မိခင်က “ဒါ စူစန်ရဲ့ကိစ္စ” ဆိုပြီး ကျွန်မကိုတားခဲ့တယ်။
တအောင့်နေတော့ ထော်ဘီ့ဆီက ငိုသံမကြားရတော့ဘူး။ စတိုခန်းထဲကနေ “မေမေ… သားမှားပြီ” လို့ သူဆိုတယ်။
“သိပါတယ်”လို့ ထော်ဘီဆီက ဖြေသံကြားမှ တံခါးကို စူစန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ စတိုခန်းထဲကနေ ထွက်လာတဲ့ ထော်ဘီ့မျက်နှာပေါ်မှာ မျက်ရည်စီးကြောင်းနှစ်ခုကို တွေ့လိုက်တယ်။ သူ့ထက်နှစ်ဆမြင့်တဲ့ ကြမ်းတိုက်တံကို မနိုင်မနင်းကိုင်ရင် ထော်ဘီကြမ်းတိုက်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး လျှော်ဖွတ်နေခဲ့ပါတယ်။
တအံ့တသြဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မကိုကြည့်ပြီး စူစန်မိဘတွေက ရယ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်က ကျွန်မရင်ထဲ နက်နက်နဲနဲ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အရှေ့တိုင်းက မိသားစုအများဟာ သားသမီးတွေကို သွန်သင်ဆုံးမချိန်မှာ “ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်အောင်” ဖန်တီးနေခဲ့သလိုပါပဲ။ ကလေးကို ဆိုဆုံးမချိန်မှာ အမေဘက်က အဘိုးအဘွားက တားလိုက်၊ အဖေဘက်က အဘိုးအဘွားက ကာကွယ်ပေးလိုက်၊ လင်မယားချင်း ရန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ ဆူညံ့ဗွက်လောရိုက်နေတတ်ပါတယ်။
“ကလေးကို မိဘတွေကပိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို သွန်သင်ဆုံးမတဲ့ မိဘတွေရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုကို ကျွန်မတို့လေးစားရမယ်။ ကလေးက ငယ်တယ်ဆိုပေမယ့် ပါးနပ်ကြတယ်။ သူ့ကိုသွန်သင်တဲ့ မိဘတွေ စိတ်ဝမ်းကွဲတာ၊ အမြင်မတူတာတွေ့ရင် သူ့အတွက် လွတ်ပေါက်၊ ကယ်ပေါက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကို သူသိတယ်။ ဒါဟာ သူရဲ့အပြုအမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ အကျိုးမရှိစေတဲ့အပြင် သွန်သင်ဆုံးမလေ ရှုပ်လေဖြစ်ပြီး ပြဿနာတွေ ပိုကြီးလာတတ်တယ်။ မိသားစုအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေ၊ ငြင်းခုန်တာတွေဖြစ်ပြီး ကလေးကို ပိုမလုံခြုံစေဖြစ်တတ်တယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်”
“ဒါကြောင့် အဘိုးအဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေကို ဆိုဆုံးမရာမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲတာတို့၊ မိဘချင်း သွန်သင်ဆုံးမပုံ ကွဲပြားတာတို့ဟာ ကလေးရှေ့မှာ မငြင်းခုန်သင့်ဘူး။ မဖြစ်သင့်ဘူး”
အောင်မလေး ဖတ်ပြီးတော့ လန့်သလိုလိုပဲ…:P
တစ်ဖက်က ကလေးကိုလည်းသနားတယ်…..နောက်တစ်ဖက်က အဲဒီလိုလုပ်တာ ကောင်းတယ်လို့လည်းထင်မိတယ်။ သူတို့ဆီက လူနေမှုပုံစံသိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဲဒီလိုနဲ့ ကြီးလာတဲ့ အမေရိကန်ကလေးတွေဟာ .. ကမ္ဘာ့ရှေ့ တန်းရောက်သူတွေဖြစ်လာတာပါပဲ..။
ဒီလိုဖြစ်အောင် ..သူတို့တွေ ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဆာဗေးတွေအထပ်ထပ်လုပ်.. စံနစ်တကျ … ပြင်ဆင်ပြုပြင်မွန်းမံလာကြတာပါ..။
အခုစာတွေက ..အမေဆုံးမတာပဲ ရေးသေးတာ..။
အဖေဆုံးမတာမှာ .. ကလေးကို နံရံမျက်နှာကပ်ခိုင်းပြီး .. ခါးပါတ်နဲ့ တင်ပါးကိုလွှဲရိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်..။
ကလေးက ..ရဲခေါ်လို့မဖြစ်အောင် .. အဖေက ကြိုခေါ်ပေးထားပြီးမှ .. ရဲရှေ့ မှာ စည်းကမ်းတကျဆော်တာ..။
အဲဒါမျိုးလုပ်လို့ရတာကို .. သဘောပေါက်နားမလည်တဲ့ အရှေ့ တိုင်းသားတွေခမျာ .. ကလေးရိုက်လို့..ကလေးကရဲတိုင်လိုက်ရင် .. တစ်ကက်(ဒဏ်လက်မှတ်)ရမှာမို့ .. ကလေးမရိုက်ရဲ..မဆုံးမရဲပဲဖြစ်နေတာ ..ကြုံဖူးတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ..ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ .. အရင်ဆုံးပြင်သင့်တာက ..
၁) ကလေးကို မိဘကဆုံးမနေရင် .. အဖိုးအဖွားအပါအ၀င်..ဦးလေး၊အဒေါ်..ဘယ်သူကမှဝင်မရှုပ်တာပါပဲ..။
၂) နောက်တခုက … အပြန်အလှန် တောင်းပန်တာ၊ ခွင့်လွှတ်ကျေအေးတာ၊
၃) မနက်အိပ်ယာထ နှုတ်ဆက်တာ၊ ညအိပ်ယာဝင် ..နှုတ်ဆက်တာ
ကျွန်တော်အရမ်းကြောက်သွားတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် သမီးကို တအားအလိုလိုက် ထားတာ။ ကလေးကို ကျွန်တော်ဖျက်ဆီးမိသလို ဖြစ်နေပြီ။
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကို အတုယူသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကောင်းလို့ထင်ပါတယ်။ ကလေးဆိုတာ အနာဂတ်ရဲ့ အသီးအပွင့်ပါ။
သူတို့ မှန်ကန်တဲ့ အသိနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို တင်ပေးတဲ့သူနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ နိုင်း2စနေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ဟုတ်တယ်အရမ်းကောင်းတယ် ကျေးဇူးအရမ်းလဲတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာသားသမီးမရှိသေးပေမယ့် တူတူမလေးတွေရှိတယ် သူတို့ကိုစနစ်တကျနဲ့ကြီးပြင်းစေချင်တယ် သူ့တို့ဖြစ်ချင်တာတွေကို လိုက်လျောချင်တယ် ဒီpost ထဲကအတိုင်းတော့တစ်ခါမှ မပြုမှုခဲ့ဖူးဘူး ကိုယ်အဲလောက်လဲ အသဲမမာလို့လေ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ရလိမ့်မယ် တူအငယ်ဆုံးလေးကိုတော့တစ်ခါကလျစ်လျှူရှုဖူးတယ် ကိုယ်မကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောလို့လေ ကိုယ်ကရိုက်လိုက်တော့အော်ငိုနေလေရဲ့ အကြာကြီးငိုနေတာ ကိုယ်လုံးဝပြန်မချော့ဘူးဘယ်လောက်ငိုနိုင်မလဲ ပစ်ထားတာ အချိန်တန်တော့သူ့ဘာသာအငိုတိတ်သွားရော ပြီးတော့ကိုယ့်အနားပြန်လာကပ်တယ် အရင်ကဒီလိုငိုနေရင်အဖွားကလာချီပြီးချော့ရတာနဲ့မုန့်တစ်ခုခုဝယ်ကျွေးရတာနဲ့ ကလေးကိုယ်ကို အကပ်မခံတော့ဘူး ဒီတစ်ခါတော့သူ့ကို ချော့မယ့်သူမရှိတော့ အမှားကိုပြင်ပါ့မယ်လို့ ပြောတတ်သေးတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ ပြန်မပြောပေမယ့် ကိုယ်မကြိုက်တဲ့စကားမျိုးတော့ကိုယ်ရှေ့မှာပြောလေ့ပြောထသိပ်မရှိတော့ဘူး
ကလေးတွေကိုပျက်တာလူကြီးတွေလို့ပဲပြောချင်တယ် ပန်းကောင်းအညွန့်ချိုးနေတာအဖိုးအဖွားနဲ့ လူကြီးတွေဘဲ မိဘတွေရဲ့မေတ္တာဟာလွဲချော်နေပါသေးတယ်
အရမ်းကောင်းတယ် နွယ်ပင်ရေ…. တကယ်ကိုအတုယူချီးကျူးစရာပါ ဟောပြောပွဲသာဆို လက်ခုပ်ကိုအကျယ်ဆုံးတီးမိမှာပဲ
ကျန်တာတွေ သဘောတူပေမဲ့ ကလေးကို စတိုခန်းထဲ ပိတ်တာ ကန့်ကွက်ပါတယ်၊ တစ်ချို့ ကလေးတွေမှာ claustrophobia လို့ခေါ်တဲ့ အခန်းကျဉ်းကြောက်တဲ့ စိတ်ရောဂါ ရတတ်ပါတယ်၊ ဥပမာ ဓါတ်လှေခါးထဲ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ရင် ကြောက်ပြီးမေ့သွားတာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊မှောင်ထဲမနေရဲတာလဲ ကလေးဘ၀က ရခဲ့တဲ့ စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးပါဘဲ၊
အဟိ – သိနေတယ်နော်။ နာမည်ပြောင်းလဲ ဒီအသံလေး က နားထဲစွဲ နေမြဲ။
ကလေးကို အဲလိုဆုံးမဖို့နေနေသာသာ နွယ်ရေ Rose တော့ သူငိုရင်တောင် အသဲနာလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်မှာတူမ ဂျစ်ကန်ကန်စာမလုပ်ချင်လို့ ရိုက်ဖူးတယ် ခြေသလုံးကို သူနာတာမြင်တော့ စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာ ကိုယ်လဲငိုမိမှစိုးလို့။ ရိုက်ပြီး သူ့ရှေ့ကနေ ထွက်ပြေးရတယ်။ အဲလောက်ထိ ကလေးကို မလုပ်ရက်တာ။ကလေးမျက်နှာကို ကြည့်ပြီးတော့လဲမရိုက်ဘူး။ သူငိုနေမှန်းသိလို့။ မကြည့်ရက်တာ။ နောက်မှ စာပြီးအောင်လုပ်ပြီးကလေး ကိုမုန့်ဝယ်ကျွေးလိုက်တယ်။ သူလဲပျော် ကိုယ်လဲ သူ့မျက်နှာပျော်မှပဲစိတ်က ချမ်းသာတော့တယ်။ မှန်တယ် မှားတယ်တော့မသိဘူး။ အခုခေတ်ကလေးများ အရမ်း ကိုအကင်းပါးလွန်းလို့။ ဘယ်လိုထိန်းရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။ သူ့အမေ ရိုက်ရင်တောင် ၀င်ပြီှးဆွဲမိမှာဆိုးလို့ ဝေးဝေးနေတယ်။ Rose အမေသူ့ အဖွားက တစ်ယောက်က ရိုက်လို့ဝင်ဆွဲရင် ကလေးကိုချစ်ရာ မရပဲ နှစ်ရာရောက်တယ်လို့ပြောပြောထားလို့ မမြင်ချင်ဝေးဝေးနေရတယ်။ ကလေးကို သူ့အမေစော်နေတဲ့ အချိန်။ Rose အမေကတော့ပြောရှာပါတယ်။ မိဘက သားသမီးကိုသေအောင်ရိုက်ပါ့မလားဟယ်တဲ့။ အော် ဟုတ်သားပဲလို့ ဖြေသိမ့်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်သားမမီးများရရင် ဘယ်လိုများလုပ်ဖြစ်မယ် မသိတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်တယ်နွယ်ရေ။ စာလေးကိုတင်ပေးတာ။
နွယ်ပင်က ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီးပြီးချင်း အရမ်းကို သဘောကျသွားခဲ့တာပေါ့
အဲဒါကြောင့် ရွာကလူတွေကိုပါ ဖတ်စေချင်လို့ မနိုင်းနိုင်းစနေ ဆီကနေကူးပြီး တင်ထားခဲ့တာပါ
ဒီအထဲက အကြောင်းအရာလေးတွေကို သဘောကျပင်မယ့် ကိုယ်ကိုတိုင်ကျရင်ရော
အဲဒီထဲက အမေလို ကလေးတစ်ယောက်ကို နီးစနစ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ထိန်းနိုင်ပါမလား
ဆိုပြီး စိတ်ပူမိတာကတော့ အမှန်ပဲ ……..
တကယ်တော့ အငိုလွယ် အရှိုက် ခက်တာ မိခင်တွေဘဝ ဘဲ။
စုပ်လဲစူး၊ စားလဲရူး။ မလွယ်ဘူး။
ကလေးတစ်ယောက် ကိုပျိုးထောင်ရတာ ပရိုဂရမ် တစ်ပုဒ် ရေးရတာထက် အများကြီး အဆပေါင်း ထရီလီရမ် မက ကွန်ပလီကိတ် တယ်နော်။
အပျိုကြီး လုပ်တာ အဲဒီ အရှုပ်တွေ ကင်းတယ်နော်။
ရွာသူ တွေ စိတ်ကူး မလွဲနဲ့။ မလွန်ခင် စဉ်းစားကြ။ ;-)
(ဂဂ တို့၊ မောင်အေကေကေအို တို့၊ တိုက်တိုက် တို့ ကြားရင် ထဆဲ မလား၊ တိတ်တိတ်လေး သဘောကျနေကြမလား)
ခုတော့ ရေလည် တင်းသွားပြီ ….. လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် က..ဒီလို comment မျိုး ဘာလို့ မရေးခဲ့တာဒုန်း အရီး~~~~~~~ လတ် ရဲ့ … …… :-( …. ဂါး ……
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် က ပိုးမဝင်သေးလို့။ ;-)
ဆိုတော့ ….. မင်း က လက်လွန်သွားပြီလား။
မင်းကို လူလွတ်မှာ တောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လို့ အရီးက ထင်နေတာ။
ဒီမှာတော့ ကလေးတွေကို တအားအလိုလိုက်ကြတော့ ချစ်ရာမရောက်ဘဲ နှစ်ရာရောက်သွားကြတယ်နော်။
ငယ်ငယ်လေးထဲက ခေါင်းထဲကို ရိုက်သွင်းထားတော့ ကြီးတဲ့အခါ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်ကြရတာပေါ့နော်။